Daawo sawirrada sida Siilaanyo u booqday magaalada Laascaanood * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Jan 22, 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Maxmed Maxamuud (Siilaanyo) oo maalmahaan booqasho shaqo ku marayey deegaano ka tirsan dhulka maalmukiisu ka jiro ayaa shalay gaaray magaalada Laas-caanood ee xarrunta gobolka Sool.
Wafdiga Siilaanyo waxaa Laas-caanood kusoo dhaweeyey maamulka magaalada, qaar ka mid ah dadka magaalada iyo ciidamada Somaliland ee halkaas ku sugan.
Siilaanyo iyo xubnaha la socday ayaa waxaa markaas kadib la geeyey Xamdi hotel, halkaasoo uu kula kulmay qaar ka mid ah Cuqaasha gobolka Sool, sida Daraad Jaamac Garaad Ismaaciil, Garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed iyo xubno kale.
Dhinaca xukuumadana waxa halkaasi ka hadlay wasiirka Warfaafinta, C/llaahi Maxamed Cukuse, Wasiirka hawlaha Guud Cabdirisaaq, Wasiirka Biyaha, Xuseen, Wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Warancade.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu uga mahadnaqay Bulshada reer Sool soo dhawaynta ay soo dhaweeyeen isaga iyo weftigiisaba, wuxuuna yiri “Alle ha idin karaameeyo hana idin sharfo, waad nasharafteene, wixii baahiyo ka jira gobolkana waxa aanu halkan maanta u marayno ayaa kow ka ah, diyaarna waxaanu u nahay mar walba in aanu idin barbartaagnaano ka xukuumad ahaan”.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu kormeer ku soo maray fadhiisimada ciidamada Somaliland ee jiidaha hore ku sugan, isaga oo salaan ka qaatay ciidamadaas.
Madaxweynuhu wuxuu hadal u jeediyay Ciidanka waxaanu yiri “Aad iyo aad ayaanu aniga iyo weftiga ila socdaaba ugu faraxsanahay inaanu maanta idin la joogno Oo Ciidamada Qaranka jiida hore u nimaadno. Aad baanu idiinku faannaa, aadbay umaddu idiinku faantaa, waxaad tihiin dadkii Umadda iyo dalkan daafacayay ee heeganka u ahaa, daacadda u ahaa, mar walba heeganka u ahaa inay naftooda u huraan daafacaddiisa iyo midnimada dalka, annaguna aad baanu idiinku mahadcelinaynaa oo idiinku faanaynaa. Waxaanu idiinku nimid inaanu idin aragno oo inkasta oo masuuliyiintiinu nooga kiin waramayaan haddana indhahayaga idinku aragno oo xaaladdiina ogaano oo diin mahadnaqno oo idin faannino”.
Magaalada Laas-caanood oo ah xarrun gobolka Sool ayaa waxaa ka jira muran, waxaa sheegta maamullada Puntland iyo Khaatumo, hase ahaatee waxaa gacanta ku haya maamulka Somaliland.